China Trucker okpu emepụta na suppliers | Wangjie
Trucker okpu, ụfụfụ ntupu okpu, 5panels okpu
Ihe: 5 panel elu mma okpu, ụfụfụ na ntupu
Size: Agba okenye (58cm)
Mmechi: snap plastic
Agba: Agba niile dị
4 eriri akwa akwa na elu, polyester sweatband. Kpuchie elu,
mmechi azụ nwere ike ịhọrọ velcro, snap snap, enwere ike gbanwee okpu ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Logo: Mbipụta, Embroidery na nnyefe mbufe ọkụ, mbipụta akwụkwọ
Sample Service: oghere samples maka free.
sample oge: 3-5days
Mbukota: 50pcs / polybag / n'ime igbe, 200pcs / katọn
Nha katọn: 70 * 45 * 38cm
Nzube anyị ga-abụ inye ezigbo ihe ihe dị na ọnụego asọmpi, na ọrụ kachasị elu nye ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa. Anyị bụ ndị ISO9001, CE, na GS nyere asambodo ma na-agbasosi ike na nkọwa ha dị mma maka ọnụahịa ọnụahịa 2019 China polyester Custom Logo Pattern Flat Embroidery Logo Baseball Sublimation Printing Sequince Embroidery Pressing Logo Woven Patch / Snap Back / Golf /Okpu okpuNdị otu ụlọ ọrụ anyị na iji teknụzụ na-egbusi ike na-eweta ngwaahịa impeccable nke kachasị mma maka atụmanya anyị gburugburu ụwa.
2019 wholesale price China Cap Hat and Baseball Cap price, Anyị ga-ebute nke abụọ nke usoro mmepe anyị. Companylọ ọrụ anyị na-atụle "ọnụahịa ezi uche dị na ya, oge nrụpụta ọrụ dị mma na ọrụ azụmaahịa dị mma" dị ka ụkpụrụ anyị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na nke ọ bụla anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ga-amasị-atụle a omenala iji, cheta na-eche free ịkpọtụrụ anyị. Anyị anọwo na-atụ anya ịmepụta mmekọrịta azụmahịa na-aga nke ọma na ndị ahịa ọhụrụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.
Anyị kwenyere na: Innovation bụ mkpụrụ obi na mmụọ anyị. Ndụ anyị magburu onwe ya. Shopper kwesịrị inwe bụ Chineke anyị maka Professional Design China Five Color Fashion Games Group Embroidery Trucker Cap Custom Logo Sport Cap, Anyị n'ụzọ zuru ezu na-anabata ndị na-azụ si n'ebe nile n'ụwa ka guzosie ike ma na-enye aka obere azụmahịa mkpakọrịta, ka a vibrant ọdịnihu n'akụkụ otu ozo.
Professional Design China Baseball Cap na Sport price, hergbaso ụkpụrụ nke "prisbanye na Eziokwu-achọ, kpomkwem na ịdị n'otu", na nkà na ụzụ dị ka isi, anyị ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ọhụrụ, raara nye gị ihe ndị kasị elu na-eri-irè ngwaahịa na azịza na nlezianya mgbe-ahịa ọrụ. Anyị kwenyesiri ike na: anyị pụtara ìhè dị ka anyị pụrụ iche.
Ebumnuche anyị ga-abụ imezu ndị na-azụ anyị site na ịnye ụlọ ọrụ ọla edo, ezigbo uru na ezigbo mma maka ọnụ ala China 6 Panel Custom 3D Embroidery Logo Hats Trucker Caps Snapback Hat Baseball Caps, Anyị na-edebe mmekọrịta ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide na ihe karịrị 200 ndị na-ere ahịa mgbe ha nọ na USA, UK, Germany na Canada. Ọ bụrụ n’ị masịrị gị n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’ihe ọ bụla n’ime ngwaahịa anyị, hụ na ị ga-eche na ọ naghị efu ịkpọtụrụ anyị.
Ọnụ ego dị ọnụ ala nke China na Hats, na usoro arụmọrụ zuru oke, ụlọ ọrụ anyị merie ezigbo aha maka ngwaahịa anyị dị elu, ọnụ ahịa ezi uche na ezigbo ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị guzobere sistemụ njikwa njikwa njikwa ejiri ihe na-abata, nhazi na nnyefe. N’irubere ụkpụrụ nke “Ebe E Si Nweta mbụ na ahịa supremacy”, anyị ji obi anyị na-anabata ndị ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ na-arụkọ ọrụ na anyị na-enwe ọganihu ọnụ ike a amamiihe n'ọdịnihu.
Nke gara aga: Ntupu azụ okpu
Osote: China Hpmc
China ntupu Trucker Cap
Okpu China Na-ebuba Maka Ndị Nwoke
Omenala Trucker Cap
ụfụfụ ntupu okpu
Hfụfụ Uwe Ochie
Polar ajị anụ na-agba agba ntị Band ekpuchi
Owu Obo Oya Oya Oya
6 Panel iku ume Corduroy 3d embroidery custo ...
100% Acryli Plain dai Beanie ngwaahia Unisex ...
Acryli Omenala embroidery Winter Knitted Beanie ...